माओवादीमा ३ सय २५ बुद्धिजीवी ! « Pahilo News
माओवादीमा ३ सय २५ बुद्धिजीवी !
प्रकाशित मिति : 12 July, 2016 6:04 pm
२८ असार । माओवादीका विभिन्न घटकहरु मिलेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनेपछि उनीहरु निकट बुद्धिजीवी संगठनबीच पनि एकता भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनको अध्यक्षमा नरेश भण्डारी चयन भएका छन् भने ३ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरिएको छ ।
एकतापछि निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा माओवादीका बुद्धिजीवी फाँट इन्चार्ज दीनानाथ शर्माले भत्किएका संगठनहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन पार्टी सफल भएको बताए । उनले बुद्धिजीविहरुले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
असार २६ गते भेलापछि आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार प्रादेशिक भेला आउने साउन मसान्तभित्रै सक्ने गरी तयारी थालिएको छ ।
राज्यले बुद्धिजीवीलाई सधैं सत्तादेखि बाहिर राखेर गल्ती गरेको उल्लेख गर्दैै अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘बुद्धिजीवीलाई सत्तामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी विङ, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी संगठन र क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी संगठन मिलेर नयाँ संगठन बनेको हो । संगठनको उपाध्यक्षमा नन्दकुमार थापा, महासचिवमा कृष्ण केसी, सचिवमा गुणराज गौतम र कोषाध्यक्षमा भीमसेन गौतमलाई चयन गरिएको छ ।